Ihe ị ga-eme n'àgwàetiti Fuerteventura | Akụkọ Njem
La agwaetiti Fuerteventura bụ nke agwaetiti nke Canary Islands na Spain. Isi obodo ya bụ Puerto del Rosario na ọ bụ agwaetiti nke anọ ndị mmadụ bi na Canaries. Agwaetiti Canary niile dị ezigbo njegharị, ebe ihu igwe dị ezigbo mma n’ime afọ, yabụ onye ọ bụla na-agbanahụ n’ịchọ anyanwụ mgbe ọ bụla.
Anyị na-aga -ahụ niile ebe ị ga-ahụ Fuerteventura, ya eke ogige ntụrụndụ, isi obodo na n'ezie ndị magburu onwe osimiri nke bụ isi engine. Ọ bụrụ na ịchọrọ ezumike nke ezumike ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ anyanwụ na ụsọ osimiri, yana oghere oghere, chee echiche banyere Fuerteventura.
1 Gaa na dunes na obodo Corralejo
2 Were ụgbọ mmiri gaa agwaetiti Lobos
3 Mee njem site na ụlọ ọkụ gị
4 Gagharịa n'obodo Betancuria
5 Lee osimiri Cofete
6 Osimiri Fuerteventura
Gaa na dunes na obodo Corralejo
Ugwu ndị a dị n'akụkụ ugwu nke agwaetiti ahụ, n'akụkụ obodo ha na-ekerịta aha ha. Ha bụ nnukwu dunes dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri, yabụ na odida obodo agaghị ahapụ onye ọ bụla. Na Ogige Ntụrụndụ Corralejo bụ oghere jupụtara na dunes na mmiri turquoise na ala. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ala ndị kachasị chọọ ya, na ebe anyị kwesịrị ịga. Agwaetiti Fuerteventura na-enye anyị ọdịdị ala pụrụ iche ebe anyị ga-ese foto kacha mma. Ogige ahụ dị ihe dị ka kilomita asatọ n'ogologo, n'ihi ya, anyị nwere ike iji ụtụtụ gaa leta ya nwayọ ma ọ bụ nwee ụsọ mmiri ya, n'etiti Playa del Moro na Playa del Burro pụtara. Ugbua n'obodo Corralejo, ebe nwekwara otutu ulo, ị nwere ike ịnụ ụtọ obodo ochie ya na n'okporo ámá ndị dị warara na ọdụ ụgbọ mmiri.
Were ụgbọ mmiri gaa agwaetiti Lobos
Agwaetiti a weghaara aha ya site na ọdụm ndị dị n'oké osimiri ndị na-adịbeghị anya n'ụsọ oké osimiri ya. Ntinye abanye n'àgwàetiti ahụ dị oke, yabụ ị ga-arịọ ikike maka ụbọchị ise tupu oge eruo. Site na Corralejo ị nwere ike iji ụgbọ mmiri gaa agwaetiti ahụ, ọ bụ ezie na ha na-ahapụ ihe dị ka elekere anọ, n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie. On a agwaetiti ị nwere ike gaa njem njem njem ma nwee oke osimiri. Mmiri turquoise nke a dị n'ụsọ osimiri Concha bụ ezigbo ebe izu ike.
Mee njem site na ụlọ ọkụ gị
Dị ka agwaetiti ọ bụla, Fuerteventura nwere ọtụtụ isi n'akụkụ ụsọ mmiri ya n'ime nke anyị nwere ike ịchọta ụlọ ọkụ, nke na-arụ ọrụ ha ma na-eje ozi dị ka ebe ndị njem nleta. Na Fuerteventura anyị nwere ike ịme ụzọ na-adọrọ mmasị site na ọkụ ụlọ ọkụ ya kachasị mma iji nwee ike ịnụ ụtọ ha na mpaghara oke osimiri ya. Na larịị Tostón dị na Punta Ballena anyị nwere ike ịga na Museum of Fishing Traditional. Lightlọ ọkụ Entallada dị na Tuineje bụ ihe ntanye ikuku na-eduzi ụgbọelu. Houselọ ọkụ Punta dị na Jandía Natural Park wee bido na narị afọ nke iri na iteghete, nwere ngosipụta n'ime ya a raara nye oke osimiri.
Gagharịa n'obodo Betancuria
Betancuria bụ otu n'ime ọmarịcha nleta na nleta nleta na Fuerteventura niile yana otu n'ime ndị kacha ochie. A obodo anyị pụrụ ịhụ Chọọchị Santa Maria na French Gothic style ọ bu na ntọ-ala-ya ha ka an buriedri ndi mbu biri n'obodo ahu. Iji mụtakwuo banyere ebe a, anyị nwere ike ịga na Archaeological na Ethnographic Museum, ebe anyị nwere ike ịhụ akụkụ nke ihe ochie na ndị mgbe ochie, ọzọ nke paleontology na ethnography. Na gburugburu ya, anyị nwekwara ike ịga na Betancuria Rural Park na echiche Morro Velosa.
Lee osimiri Cofete
Cofete osimiri bụ osimiri na-amaghị nwoke nke dị ihe dị ka kilomita iri na abụọ n’ogologo nke ahụ na-eju onye ọ bụla bịara ileta ya anya. Ga-ewere okporo ụzọ nke na-eduga n’obodo Morro Jable wee rute elele Degollada Agua Oveja anya site na ebe ị ga-agbada n’obodo Cofete wee gazie n’obodo ahụ. Na mpaghara a ị nwere ike ịga leta Casa Winter yana ebe a na-eli ozu mara mma ebe ị nwere ike ịhapụ ụgbọ ala gị. Site n'ebe ahụ ị ga-agbada n'ụsọ osimiri Cofete. Ọ bụ ụsọ osimiri nwere ebili mmiri siri ike nke anaghị atụ aro ka igwu mmiri n'ihi na ọ nwere ike ịdị egwu. Mana ọ bara uru ileta, ebe ọ bụ ụsọ osimiri nke mara mma dị egwu na ọtụtụ kilomita nke ájá.
N’agwaetiti Fuerteventura ị ga-ahụ ụsọ mmiri ndị ọzọ mara mma. Osimiri Corralejo na-ewu ewu nke ukwuu, na ọmarịcha ájá ya na mmiri turquoise. Na Sotavento osimiri dị na Jandía bụ nnukwu osimiri nwere aja ọcha bụ nke ndị mmadụ na-amalitekarị na egwuregwu mmiri n'ihi ọnọdụ ya dị mma. Gran Tarajal osimiri dị na Tuineje bụ ụsọ osimiri nke nwere aja ojii, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oji, ọ bụ ezie na ọ bụghị aja gbara ọchịchịrị nke osimiri ndị mgbawa ugwu dị ka Tenerife, mana o nwere amara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-eme na Fuerteventura
Ihe ị ga-ahụ na Zurich